यि दुई महिला जसले दिन्थे ग्राहक माथि यस्तो अफर,यिनीहरुले गर्ने काम देखेर सबैको होस् उड्यो ! – List Khabar
Home / समाचार / यि दुई महिला जसले दिन्थे ग्राहक माथि यस्तो अफर,यिनीहरुले गर्ने काम देखेर सबैको होस् उड्यो !
admin October 25, 2021 समाचार Leaveacomment 162 Views
त्यसपछि ती महिलाले पोलिसी लिनेहरुलाई शा,री,रिक स,म्प,र्कको सेवा दिन थालिन् । अभियुक्त महिलाले प्रहरीसँग भनिन् कि बीमासँगै यो सेवा दिन थालेपछि महिनामा नै–नौ पोलेसीहरु बनाउन सफल भइन् ।
त्यसकारण, उनले एक महिनामा भारू ७५ हजार अर्थात (झण्डै १ लाख २० हजार) रुपैयाँ कमीशन पाइन् । अर्को महिनामा पन्ध्र र त्यस पछि संख्या बढ्दै गएको बयान उनले प्रहरीलाई दिइन् ।
पक्राउ पर्ने अभियुक्तमा राहुल दास, गाउँ खिरुवा प्रहरी चौकी, नुरिया जिल्ला, पीलीभीत हल, कांशीराम नगर, प्रहरी चौकी माझोला जिला, मुरादाबाद निवासी राजु निवासी मोहल्ला बसन्त विहार कालोनी खुशालपुर प्रहरी चौकी माजोला, हल ठेगाना मोहल्ला सम्राट अशोक नगर नमकिन कारखाना प्रहरी चौकी मझोला, धीरज भटनागर उर्फ ​​बाबू निवासी दीन दयाल नगर एमडीए प्रहरी चौकी सिभिल लाइन्सका एक महिला अमरोहा र अर्की बिलासपुरकी रामपुरकी हुन् ।
Previous भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक ९ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल